About us | Beyin ukupakisha | ukutya ibhegi mveliso
Iphepha le-Kazuo Beyin kunye nePlastiki yokuPakisha Co., Ltd. eyandulelayo yiXiongxian Juren Paper kunye nePlastiki yokuPakisha Co., Ltd, yasekwa ngo-1998 ekuqaleni. Sasingenawo umgca wemveliso ngelo xesha, sinokwenza urhwebo kuphela. Njengoko ixesha liqhubeka, safumanisa ukuba kunzima kakhulu ukuqinisekisa umgangatho kunye nexesha lokuvelisa ukuba asinayo eyethu imveliso. Emva koko sagqiba kwelokuba sakhe eyethu imigca. Sizamile sahluleka amaxesha amaninzi, sadibana neengxaki ezininzi, xa siprinta, imibala ayisoloko iyinto elungileyo esiyifunayo; Xa silaminetha, izinto zihlala zishwabene; Xa sisika, iingxowa zihlala zijijekile , Kodwa asizange sinikezele kwaye ekugqibeleni siphumelele ekufumaneni amawaka ezilingo. Okokugqibela sinokunika iingxowa ezifanelekileyo kubathengi bethu.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yophuhliso, ngoku ukupakisha kukaBeyin kuye kwaphuhliswa kwishishini elinemveliso elikhethekileyo ekuphuhliseni nasekuveliseni iibhegi zokupakisha. Imveliso inokufikelela kwi-RMB yezigidi ezingama-60 ngonyaka; Iindibano zocweyo ezisi-7 zakhiwe ngeeseti ezingama-50 izixhobo ezikhokelela kushishino ezifakiweyo. Njengo: oomatshini bokuprinta umbala we-9, oomatshini abancinci be-laminated kunye noomatshini bokugubungela ifilimu, ukwahlula kunye nokusika oomatshini, oomatshini be-oveni kunye neminye imishini yokwenza ibhegi.
Bangaphezu kwe-100 abasebenzi abasebenza ukupakisha eBeyin, abangama-50 kubo ngamagcisa oqeqeshiweyo aqeqeshiwe ngokuprinta iziqinisekiso, amagcisa aphezulu ali-10 sele ethathe ishishini lokupakisha kangangeminyaka eli-10. Abasebenzi abazizityebi abanamava banelisa ngokupheleleyo zonke iimfuno zabathengi.
Ngaphandle koko, kukho ukuthengisa okungaphaya kwama-30 okugqwesileyo kwi-Beyin Packing, eya kuthi incede abathengi ekusombululeni iingxaki zabo. Ukwaneliseka kwabaThengi kukulandela kwethu.Siza kunceda abathengi, imveliso kunye nokuthumela, njl.
Siyathembisa ukuba siza kuphendula zingaphelanga i-30mins emini, kwaye ngaphakathi kweeyure eziyi-8 ngexesha lasebusuku. Sizimisele ukunceda ukusombulula iingxaki, nokuba uza kuyalela okanye hayi okokugqibela. Ngaphezulu kweminyaka engama-20, kunqabile ukuba abathengi bakhalaze ngathi, kwaye singathembisa ukuba ngekhe uzisole ngokusikhetha.
Iphepha likaKazuo Beyin kunye nokuPakisha kwePlastiki, Ltd.
Inkampani yethu izibophelele kuphando lweengxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane
Ukupakisha kuka-Beyin ngoku sele kungamashishini aqolileyo kwaye azinzileyo, asilibali ukuba singakhula njani ngokukhawuleza ngenxa yenkxaso evela kuluntu lwethu nakubathengi. Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukubuyisela eluntwini.
Sizinikezele kuphando malunga neengxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane, ngethemba lokunciphisa inkunkuma yeplastiki emhlabeni. Sizamile iminyaka emininzi, kwaye ekugqibeleni safumana i-masterbatch evela kwinkampani yase-Welles yase-UK enokongezwa kwizinto ezinje nge-PE, i-BOPP, i-PET, njl.njl., Ukwenza iibhegi ezinamathambo zibenokuboliswa ziintsholongwane. Sinceda ukwazisa abantu abaninzi kwaye basebenzise le nto endaweni yeplastiki eqhelekileyo ngaphandle kweendleko, kuba sinethemba lokuba singagcina kwaye sikhumbule ubuhle bendalo esingqongileyo.
Ngaphandle koko, sinomdla wentlalontle yoluntu. Saya kwi-geracomium amaxesha amaninzi, apho kuhlala uninzi lwexhego elililolo. Siyakholelwa ukuba, intlalo elungileyo kufuneka ivumele abantu abadala ukuba babe nomntu abaxhomekeke kubo, kwaye sizimisele ukufaka isandla kwindima yethu.
Ukupakisha kukaBeyin yinkampani efanelekileyo, enoxanduva kwaye inentliziyo entle. Sijolise kuphuhliso oluzinzileyo, ukwaneliseka kwabathengi, kwaye sikhathalele ukonwaba kwabasebenzi.
Ukulungele ukufumana okungakumbi? Qalisa namhlanje!
Asisoze silibale ukuba kutheni siqala, ke siyazi apho siya khona!